Posted by: zayyarnaymin on: December 24, 2008	In: Uncategorized
ကိုယ်ဟာ ခရစ္စမတ်ရဲ့ ဘယ်လို အဆင်တန်ဆာလေးလဲ………….။ သိချင်ရင် အောက်ပါ ဥာဏ်စမ်းတွေကို ဖြေကြည့်လိုက်ပါ..။
ထုံးစံအတိုင်း ခရစ္စမတ် အကြိုညကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးမလဲ…။ (က) ကံသိပ်ကောင်းဖို့ ခရစ္စမတ် အကြိုသီချင်းဆိုလား။
လှို့ဝှက်ချက်ကို ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းထားလား…..။ (က) တစ်ခါတစ်ရံ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်ကို ပြောမိတယ်။
တစ်ယောက်က ဒေါသဖြစ်အောင် စရင် ဘာလုပ်မလဲ………။ (က) ကျွန်မက စိတ်ဆိုးခဲပါတယ်။
သူငယ်ချင်း ဘယ်လောက်များများရှိသလဲ………………..။ (က) အမြဲတမ်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတာပဲ။
သင်ဟာ …… ခရစ္စမတ် ဘောလုံးလေးပေါ့…. ။ ခရစ္စမတ် ဘောလုံးလေးချိတ်ဆွဲထားသလို သင်ကလည်း လူအများရှိတဲ့ နေရာမှာ “မေတ္တာ” ကို ချိတ်ဆွဲပြသရမယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပျံ့လွင့်စိတ် အနည်းငယ်လောက်ရှိတဲ့ သင်ဟာ မိသားစုနဲ့ အတူ အချိန်ကုန်ရတာကို ကြိုက်တယ်။ ခရစ္စမတ်အခါသမယဟာ သင်အနှစ်သက်ဆုံး အားလပ်ရက်အချိန်လေးပေါ့။ ရွေးတဲ့အဖြေက (ဂ) များရင်……………….
သင်ဟာ…………… အမြဲစိမ်းခရစ္စမတ် Holly ပင်ပေါ့။ ဆူးများတဲ့ ခရစ္စမတ် Holly ပင်လေးလိုပဲ။ သင်ဟာ ကျွဲမြီးတိုတတ်တယ်။ လူတွေက သင့်အမှားအယွင်းကို ထောက်ရင် သူတို့ကို သင်က ပြန်ပက်တတ်တယ်။ ကျွဲမြီးတိုတတ်သူဖြစ်ပေမယ့် သင်ဟာ အားထားရလောက်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၊ သင့်ကို ဖွင့်ချတဲ့ ဘယ်လိုလှို့ဝှက်ချက်ကိုမဆို အန္တရာယ်ကင်းကင်း ထိန်းထားနိုင်ခြေမှာရှိတယ်။ I think, you’ll be satisfied on this pool!
Another Posts to Read!	ခရစ်စမတ်အကြောင်း တစေ့တစောင်း…။
Click onaword that you are interested!candy cane
various language with christmas
wallpapersSpecial Merry Christmas Songs!	Merry Christmas Selection songs
Santa Ski Jump Games!	Santa Ski JumpHelp Santa perform amazing ski jumps and collect the stars. Play this free game now!!
Sleigh Shot Games!	Sleigh ShotSanta's competing in the Long Distance Sleigh Shot again this year.
Deep Freeze!	Deep FreezeFreeze your enemies with your water gun. Play this free game now!!
Santa Claus’s snow line!	Snow LineHelp Santa Claus collect the presents.